सरकारको लाचारीले संक्रमण घट्ने होइन, दिन दुगुना रात चौगुना बढ्नेमा कुनै शंका छैन « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
सरकारको लाचारीले संक्रमण घट्ने होइन, दिन दुगुना रात चौगुना बढ्नेमा कुनै शंका छैन
टुना भट्ट –
टेकुस्थित सेन्ट्रल ल्याबको लाइन छिचोलेर परीक्षण गराउन सक्ने ताकत शरीरमा थिएन । निजी ल्याब मै जाने निर्णय गर्दै लाजिम्पाटस्थित घर नजिकै रहेको सूर्य डाइग्नोस्टिक सेन्टरमा फोन लगाएँ । ‘अहिले हामीले तिनकुनेस्थित कान्तिपुर हस्पिटलबाट स्याम्पल कलेक्सन गरेका छौँ, त्यहीँ गएर दिनुस्’ भन्ने जवाफ आयो ।
सोही अनुसार तिनकुने पुगेँ । त्यहाँ अस्पतालको गेटबाटै लाइन थियो, ४०/५० जना जति । ‘चोक्टा खान आएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी’ झैँ भयो । आफैदेखि रिस उठ्यो । लाइन छल्न र संक्रमणको जोखिम कम गर्न भन्दै हिँडेकी म लगभग ३० मिनेटभन्दा बढी लाइनमा बसेँ । तर अन्य ल्याब, अझ सरकारी ल्याबमा भन्दा धेरै कम हो यो लाइन । नागरिकले घण्टौँ लाइन लाग्नुपर्ने पीडा झेल्दै आइरहेका छन्, जहाँबाट संक्रमणको जोखिमसमेत अत्याधिक हुन्छ ।
एउटा मास्क किनेर लगाउन नसक्ने जनता, जो दुई हजार तिरेर पिसीआर गरी विदेश जान लाग्दैछन् । मन भरिएर आयो । ती अनुहारको माया लाग्यो । मनमनै सरकारलाई धिक्कार्न थालेँ । सरकारले परीक्षण निःशुल्क गरिदिने हो भने जनताको कति कल्याण हुनेथियो होला , अनि व्यापारका नाममा ‘पोजेटिभ र नेगेटिभ’को खेल पनि पक्कै कमी हुने थियो ।
यत्रतत्र मास्क फालिएको छ भने लाइनमा बस्ने कोही पिच्चपिच्च थुक्दै छन् । होइन, यस्तो गर्नु हुन्न भन्ने थाहा नभएको होला त यस्ता युवाहरुलाई ? कि थाहा भएर पनि हेलचक्य्राई हो यो ? कतिलाई भन्नु , सबै उस्तै थिए । संक्रमित को, नसंक्रमित को, केही पत्तो थिएन । न दुरी कायम, न सबैले मास्क लगाएका ।
मास्क लगाउनेमध्ये पनि कतिले त चिउँडोमा लगाएका । कतिको नाकमुख पनि राम्रोसँग नढाक्ने खालको मास्क । भिडमा देखिएका प्रायः अनुहार विदेश जान कोरोना रिपोर्ट अनिवार्य भएकाले पिसीआर गर्न आएकाको थियो । एउटा मास्क किनेर लगाउन नसक्ने जनता, जो दुई हजार तिरेर पिसीआर गरी विदेश जान लाग्दैछन् । मन भरिएर आयो । ती अनुहारको माया लाग्यो । मनमनै सरकारलाई धिक्कार्न थालेँ । सरकारले परीक्षण निःशुल्क गरिदिने हो भने जनताको कति कल्याण हुनेथियो होला १ अनि व्यापारका नाममा ‘पोजेटिभ र नेगेटिभ’को खेल पनि पक्कै कमी हुने थियो ।
बाहिरै गार्डले फारम राखेका थिए । त्यहीँबाट फारम लिएर अरुसँगै मैले पनि भर्न थालेँ । फारममा व्यक्तिगत विवरण भर्नुपर्ने थियो । एकजना अधवैंसे पुरुष ‘मिलेर बस्नुस्’ भन्दै आए । ‘यहाँ दुरी कायम गर्नु पर्दैन ? यस्तै हो सधैँ ?’ भनेर मैले सोधेँ । ‘जहाँ गए पनि यस्तै हो हजुर’ भन्दै उनी यताउता गर्न थाले । उनी सायद कुनै म्यानपावरबाट पिसीआर परीक्षण गराउन पो आएका थिए कि , पछि बाहिर निस्किएर ती पुरुषसँग कुरा गर्न खोजेँ तर उनी फेला परेनन् ।
गार्डले ४/४ जनालाई भित्र पठाइरहेका थिए । मेरो पालो आयो । म संक्रमित थिएँ, त्यसैले मानिसहरुबाट छलिँदै अलि टाढा बस्ने कोसिस गरिरहेकी थिएँ । तर ठाउँ अलिकति खाली देखिनेबित्तिकै पछाडिका मानिस टाँसिने गरी नजिक आइपुग्थे । ‘अलि पर बस्नुस् न’ भन्दा कसले मान्ने ? सबैलाई छिटो स्वाब दिएर निस्किन नै हतार ।
१० मिनेट कुरेपछि ल्याबमा छिर्ने पालो आयो । सोचेँ, यो भिडमा १० मिनेटमा मैले सतर्कता नअपनाएको भए कतिजनालाई सर्ने थियो होला १ हुन त १६ दिन आइसोलेशनमा बसेर जोखिमयुक्त समय पार गरिसकेकी थिएँ र ढुक्क थिएँ मबाट अरुलाई सर्दैन भनेर ।
भित्र पिपीई लगाएका एकजना युवक र एकजना युवती खै के कुराकानी गरिरहेका थिए । तीनवटा फलामका कुर्ची थिए । एकातिर किटका खोलहरुको चाङ थियो भने अर्कोतिर अलि थोत्रो टेबल । स्वाब संकलन गर्ने भाँडो त्यहीँ थियो तर बिर्को खुल्लै थियो । ‘बस्नुस्, उता हेर्नुस्’ भन्दै फटाफट नाकबाट स्वाब निकाले ती युवकले । पहिलोपटक स्वाब दिँदाभन्दा विल्कुलै फरक ढंगले लिइएको थियो । पहिला किटको एक भाग नाकभित्र ३० सेकेन्ड जति राखेर नहल्लाई निकालिएको थियो अनि थ्रोटको पनि लिइएको थियो । तर यो पटक स्वाब निकाल्न दुई सेकेण्ड पनि लागेन । अलि असहज भयो मलाई । उनीहरुलाई यो मेरो दोस्रो वा पहिलो परीक्षण केही थाहा छैन । स्वाब लिँदा पनि उनीहरुबीच गफ चलिरहेको थियो । मैले ‘यत्ति हो र ? ’ भनेर प्रश्न गरेँ । ‘हो, भइसक्यो, फटाफट निस्किनुस्’ भने । अचम्म मान्दै म बाहिरिएँ । बाहिर लाइन उस्तै थियो ।
साथीभाइ, आफन्त लगायत प्राय संक्रमितहरुले १४/१५ दिनपछि रिपोर्ट नेगेटिभ आएको भन्दै सुनाउँथे । सोही आधारमा आफ्नो पनि नेगेटिभ रिपोर्ट आउनेमा ढुक्क थिएँ । सामान्य रुघाखोकी अनि थकानबाहेक अरु समस्या थिएन । यसले पनि ममा ‘अब निको हुन्छु’ भन्ने आत्मविश्वास थियो ।
विगत सात महिनादेखि हामीले ‘वर्क फ्रम होम’ नै अपनाउँदै आएका छौँ । रातोपाटीका सबै सहकर्मी घरबाटै काम गर्दै आइरहेका छौँ । म कहिलेकाहीँ अन्तर्वाताको लागि मात्रै बाहिर निस्किए पनि प्रायः घरबाटै काम गर्छु ।
कोरोनाभाइरस समुदायस्तरमा फैलिइसकेकाले प्रायः फलफूल, तरकारी तथा खाद्यान्नलगायतका सामान खरिद गर्नुपर्दा डिजिटल पेमेन्टलाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ । ममा संक्रमण पुष्टि भएपछि छोरी निकै आत्तिइन् । तत्कालै डा। रविन्द्र पाण्डेलाई फोन गरेँ । उहाँसँग कोरोना संक्रमणका अनेकन विषयमा पहिला पनि धेरै छलफल हुँदै आएका थिए । बच्चालाई साथमा राख्दा हुने जोखिमबारे उहाँसँग छलफल गरेँ । सम्भव भएसम्म सँगै नराख्न र राख्नै परेमा छुट्टै सुत्ने र मास्क अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । मैले सोही अनुसार गरेँ । र, डा। पाण्डेले आइसोलेशनमा बस्दा अपनाउनुपर्ने सतर्कता, खानपानलगायत स्वास्थ्यअवस्थाबारे समयसमयमा सुझाइरहनुभयो ।
२६ दिनपछि टीकाको तेस्रो दिन् अर्थात् द्वादशीको दिन नेपाल मेडिसिटी अस्पताल पुगेर परीक्षण गराएँ । दोस्रो पटक परीक्षणमा जाँदाको अस्तव्यस्तता देखेकी मैले मेडिसिटीमा निकै व्यवस्थित र सहज रुपमा परीक्षण गराएँ । संक्रमित हो या होइन रु कतिऔं पटकको परीक्षण हो रु रक्त समूह, सबैको रेकर्ड राखिएको थियो । सोही साँझ फोनमार्फत रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जानकारी गराइयो र अस्पतालले रिपोर्ट ईमेलसमेत गरेको थियो ।